စီးပွားရေးတစ်ခုကို အစီအစဉ် ချဖို့ – Gentleman Magazine
စီးပှားရေးတဈခုကို အစီအစဉျ ခဖြို့
လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ တစ်ခါတော့ လုပ်ငန်းကို အရမ်းရှုပ်ထွေးမသွားခင် စာရွက်ပေါ် အစီအစဉ် ချရေးရတဲ့ အချိန် ရှိနေမှာပါ။ သင့်မှာ ငွေ ရှိနေရင်တောင် သင့်ရဲ့ စာရွက်ပေါ် ချရေးထားတဲ့ စီးပွားရေးအစီအစဉ် လိုပါသေးတယ်။
ဘယ်လို အစီအစဉ် ချရမလဲဆိုတော့
၁. အလုပ်လုပ်မယ့် အသင်း
၅. ခန့်မှန်း ဝယ်လိုအား
၆. ဝင်ငွေ အချက်အလက်
၁၀. မြှုပ်နှံသူတွေအတွက် ထွက်ပေါက်
၁၁. လုပ်ငန်းလုပ်ရသည့် အကြောင်းရင်း
၁၂. သင် လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် မျှော်မှန်းကာလ
တို့အကြောင်း ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းစီ သေသေချာချာ ချရေးပါ။ မည်သည့်ခေါင်းစဉ်ကိုမှ ချန်ထားခဲ့၍မရပါ။
ပြီးရင် နောက်တစ်ခေါက် ပြန်စစ်ပြီး လိုအပ်နေတာတွေ ဖြည့်ပါ။
သင့်ရဲ့ Plan ဟာ စာရွက်တစ်ရွက်လောက် ပါးပါးလေးကနေ စာရွက် ၁၀၀ လောက် အထူကြီးထိ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ရွက်ထဲလုပ်ထားတဲ့ Plan ကို ဘယ်သူမှ တလေးတစား ကြည့်မှာ မဟုတ်သလို ရွက်တစ်ရာ Plan ကြီးကိုလဲ ဘယ်သူမှ အစအဆုံး ဖတ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေအဖို့ အရွက်၃၀ ကနေ ၅၀ အတွင်းဟာ အဆင်ပြေပါတယ်။ စာချည်းပဲ ရွက်သုံးဆယ်အစာ စာနဲ့ ပုံနဲ့ ဂရပ်တွေနဲ့ ရွက် ငါးဆယ်က ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်။
ဘာလုပ်မှာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါ။
သင်လုပ်ချင်တာ ဘာပါလဲ။ သင့် Plan က ဘာပါလဲ။ ဘယ်လို ငွေရှာမလဲ ဆိုတာ ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကို ဘာချပြချင်တယ်ဆိုတာပဲ ပြောပြပါ။ ရိုးသားပါ။ သင့် Plan ကို ဖတ်နေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ သင် ဒါကို ဘာကြောင့် လုပ်ချင်ရတာလဲဆိုတာ သိချင်မှာပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုတာ အသင်းလိုက် လုပ်ရတာပါ။ ဒီစီးပွားရေးကို လုပ်ဆောင်မယ့် အသင်းအကြောင်း ရှင်းပြပါ။ နာမည်ကျော်သူတွေအကြောင်းက စပြောပြပြီး လုပ်သက်ရင့်သူတွေအလယ် အနာဂါတ်ရှိတဲ့ လူသစ်တွေအဆုံး အားလုံးအကြောင်းကို သေချာ ရှင်းပြထားပါ။ နောက်ဆုံး လူသစ်တွေရဲ့ အရည်အသွေးတွေ ဘာကြောင့် ရွေးထားတယ် ဆိုတာတွေကို သေသေချာချာ ရှင်းပြပါ။
သင့်ထုတ်ကုန် ဘယ်ဈေးကွက်မှာ အဆင်ပြေမလဲဆိုတာ သင်လုပ်ထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေအကြောင်းနဲ့ စပြောပါ။ အဲဒိဈေးကွက်ထဲကလူတွေကို ဘယ်လို ပစ်မှတ်ထားမလဲဆိုတာ ပြောပါ။ ခုလောလောဆယ် ဈေးကွက်အကြောင်းနဲ့ ပြိုင်ဘက် ရှိမရှိ ၊ ရှိခဲ့ရင် သင့်ပြိုင်ဘက်တွေအကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတာပါ သေချာ ရှင်းပြပေးထားပါ။
ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းရဲ့ အဓိကပါ။ သင် ဒိလုပ်ငန်းကို စနေပြီဆိုရင် သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းဝင်ငွေကို သုံးနှစ်ကနေ ငါးနှစ်အတွင်း ပြနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး ပထမနှစ်ကို တစ်လခြင်းစီ၊ နောက်နှစ်တွေကို လေးလပါတ်ခြင်းစီ ဝင်ငွေ ပြပေးရပါ့မယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ သူတို့ မြှုပ်နှံပြီးရင် ငွေရ၊ ဒီတိုင်း အပြင်မှာ ထိုင်နေပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အမြဲနေသွားကြချင်တာပါ။ သူတို့ကို ဘယ်လို ထွက်သွားလို့ရလဲဆိုတာ ပြပေးပါ။ IPO, Franchise, လုပ်ငန်းကို မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ Plan တွေဟာ အသုံးများပါတယ်။ အများပြည်သူဆီ ရှယ်ယာရောင်းတာကတော့ အစဦးလုပ်ငန်းတွေအတွက် Plan ထဲမှာ မထည့်သင့်ပါဘူး။
လုပျငနျးရှငျတိုငျးရဲ့ ဘဝမှာ တဈခါတော့ လုပျငနျးကို အရမျးရှုပျထှေးမသှားခငျ စာရှကျပျေါ အစီအစဉျ ခရြေးရတဲ့ အခြိနျ ရှိနမှောပါ။ သငျ့မှာ ငှေ ရှိနရေငျတောငျ သငျ့ရဲ့ စာရှကျပျေါ ခရြေးထားတဲ့ စီးပှားရေးအစီအစဉျ လိုပါသေးတယျ။
ဘယျလို အစီအစဉျ ခရြမလဲဆိုတော့
၁. အလုပျလုပျမယျ့ အသငျး
၅. ခနျ့မှနျး ဝယျလိုအား
၆. ဝငျငှေ အခကျြအလကျ
၁၀. မွှုပျနှံသူတှအေတှကျ ထှကျပေါကျ
၁၁. လုပျငနျးလုပျရသညျ့ အကွောငျးရငျး
၁၂. သငျ လုပျကိုငျနိုငျမညျ့ မြှျောမှနျးကာလ
တို့အကွောငျး ခေါငျးစဉျတဈခုခွငျးစီ သသေခြောခြာ ခရြေးပါ။ မညျသညျ့ခေါငျးစဉျကိုမှ ခနျြထားခဲ့၍မရပါ။
ပွီးရငျ နောကျတဈခေါကျ ပွနျစဈပွီး လိုအပျနတောတှေ ဖွညျ့ပါ။
သငျ့ရဲ့ Plan ဟာ စာရှကျတဈရှကျလောကျ ပါးပါးလေးကနေ စာရှကျ ၁၀၀ လောကျ အထူကွီးထိ လုပျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈရှကျထဲလုပျထားတဲ့ Plan ကို ဘယျသူမှ တလေးတစား ကွညျ့မှာ မဟုတျသလို ရှကျတဈရာ Plan ကွီးကိုလဲ ဘယျသူမှ အစအဆုံး ဖတျနမှော မဟုတျပါဘူး။ စီးပှားရေးလုပျငနျးငယျတှအေဖို့ အရှကျ၃၀ ကနေ ၅၀ အတှငျးဟာ အဆငျပွပေါတယျ။ စာခညျြးပဲ ရှကျသုံးဆယျအစာ စာနဲ့ ပုံနဲ့ ဂရပျတှနေဲ့ ရှကျ ငါးဆယျက ပိုပွီး ကောငျးပါတယျ။
ဘာလုပျမှာလဲ၊ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတာ ရှငျးပွပါ။
သငျလုပျခငျြတာ ဘာပါလဲ။ သငျ့ Plan က ဘာပါလဲ။ ဘယျလို ငှရှောမလဲ ဆိုတာ ပွောစရာမလိုပါဘူး။ ကမ်ဘာကွီးကို ဘာခပြွခငျြတယျဆိုတာပဲ ပွောပွပါ။ ရိုးသားပါ။ သငျ့ Plan ကို ဖတျနတေဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှဟော သငျ ဒါကို ဘာကွောငျ့ လုပျခငျြရတာလဲဆိုတာ သိခငျြမှာပါ။
စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုဆိုတာ အသငျးလိုကျ လုပျရတာပါ။ ဒီစီးပှားရေးကို လုပျဆောငျမယျ့ အသငျးအကွောငျး ရှငျးပွပါ။ နာမညျကြျောသူတှအေကွောငျးက စပွောပွပွီး လုပျသကျရငျ့သူတှအေလယျ အနာဂါတျရှိတဲ့ လူသဈတှအေဆုံး အားလုံးအကွောငျးကို သခြော ရှငျးပွထားပါ။ နောကျဆုံး လူသဈတှရေဲ့ အရညျအသှေးတှေ ဘာကွောငျ့ ရှေးထားတယျ ဆိုတာတှကေို သသေခြောခြာ ရှငျးပွပါ။
သငျ့ထုတျကုနျ ဘယျဈေးကှကျမှာ အဆငျပွမေလဲဆိုတာ သငျလုပျထားတဲ့ စဈတမျးတှအေကွောငျးနဲ့ စပွောပါ။ အဲဒိဈေးကှကျထဲကလူတှကေို ဘယျလို ပဈမှတျထားမလဲဆိုတာ ပွောပါ။ ခုလောလောဆယျ ဈေးကှကျအကွောငျးနဲ့ ပွိုငျဘကျ ရှိမရှိ ၊ ရှိခဲ့ရငျ သငျ့ပွိုငျဘကျတှအေကွောငျးနဲ့ ဘယျလိုအနိုငျယူမလဲဆိုတာပါ သခြော ရှငျးပွပေးထားပါ။
ငှကွေေးအထောကျအပံ့ဟာ စီးပှားရေးလုပျငနျးတိုငျးရဲ့ အဓိကပါ။ သငျ ဒိလုပျငနျးကို စနပွေီဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ လုပျငနျးဝငျငှကေို သုံးနှဈကနေ ငါးနှဈအတှငျး ပွနိုငျရမှာဖွဈပွီး ပထမနှဈကို တဈလခွငျးစီ၊ နောကျနှဈတှကေို လေးလပါတျခွငျးစီ ဝငျငှေ ပွပေးရပါ့မယျ။
ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှဟော သူတို့ မွှုပျနှံပွီးရငျ ငှရေ၊ ဒီတိုငျး အပွငျမှာ ထိုငျနပွေီး ပြျောပြျောရှငျရှငျ အမွဲနသှေားကွခငျြတာပါ။ သူတို့ကို ဘယျလို ထှကျသှားလို့ရလဲဆိုတာ ပွပေးပါ။ IPO, Franchise, လုပျငနျးကို မြိုးရိုးစဉျဆကျ လကျဆငျ့ကမျးပေးတဲ့ Plan တှဟော အသုံးမြားပါတယျ။ အမြားပွညျသူဆီ ရှယျယာရောငျးတာကတော့ အစဦးလုပျငနျးတှအေတှကျ Plan ထဲမှာ မထညျ့သငျ့ပါဘူး။
Previous: အရပ်ပု တဲ့ အမျိုးသားတွေအချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေစေဖို့
Next: ဆရာ ပီမိုးနင်း ရဲ့ ကာမသိန္ဓိကျမ်း